အဆိုပါပြီးစီးခဲ့စီမံကိန်း၏ရာခိုင်နှုန်းကို 40 မှ Rize, Artvin လေဆိပ်ပိတ် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ53 Rizeအဆိုပါပြီးစီးခဲ့စီမံကိန်း၏ရာခိုင်နှုန်းကို 40 မှ Rize, Artvin လေဆိပ်ပိတ်
09 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 53 Rize, အထွေထွေ, ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
လေဆိပ် artvin သဘောတူညီခကျြ, စီမံကိန်းတခုနီးကပ်စွာရင်ဆိုင်နေရခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည်
အတူတူမုဆိုး Rize နှင့် Artvin လေဆိပ်နှင့်အတူဝန်ကြီး Turhan, AK ပါတီလက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ Hayati Yazici, Rize အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Kemal ချော်, အ AK ပါတီ Rize လက်ထောက် Osman Aşkın bak နှင့်မိုဟာမက်သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိ bulunarak အရာရှိများကအဆောက်အဦးကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
Turhan, သမိုင်းနှင့် Rize, ယဉ်ကျေးမှုထည်များ၏ပရဒိသုတစ်ခုထောင့်ကသတင်းထောက်များကိုရန်ကြေညာချက်ထဲမှာစာမေးပွဲအပြီးသတင်းစာ, တစ်ဦးတည်းသာကမ္ဘာပေါ်တွင်ဦးဆောင်စီမံကိန်း၏တူရကီရဲ့ Rize နှင့် Artvin သူတို့ကလေဆိပ်ဆောက်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်မဟုတ်ပါဘူး။
စောင့်ဆိုင်း၏နှစ်ပေါင်းဖော်ပြသောလေဆိပ်ဖြစ်စေခြင်းငှါဒေသ၏လူဦး Turhan ကတိုင်းပြည်အတွင်းလေဆိပ်ဆောက်လုပ်ရေးလေဆိပ်အဘယ်သူမျှမရှာတွေ့ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်အတိတ်တည်ထောင်ရန်တစ်ခုကြိုးပမ်းမှုအတွက်, နောက်ကျောမြွေ၏ဇာတ်လမ်းမှသယ်ဆောင်မရနိုငျသောအဆက်မပြတ်အကျပ်အတည်း, ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Turhan, Rize သား Recep Tayyip အာဒိုဂန်, နိုင်ငံရေးမြင်ကွင်းတစ်ခုထွက်ခွာတိုင်းပြည်ပြန်လည်-zone ကအလေးထားပြောကြားခဲ့ပြီးခံရဖို့စတင်ခဲ့ "ဒီလေဆိပ်ကိုလည်းတိုင်းပြည်ပြန်ဆောက်ဖို့စီမံချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကပြည့်စုံစစ်တမ်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလုပ်, ဒါကြောင့်ကြှနျုပျတို့သညျဤအချက်မှာ Rize နှင့် Artvin လေဆိပ်များ၏ဆောက်လုပ်ရေးစတင်ခဲ့သည်။ Rize- လေဆိပ် Artvin, Ordu-Giresun လေဆိပ်ဥရောပရဲ့သမုဒ်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်ကွင်းပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်သည်ပင်လယ်ပေါ်မှာနည်းလမ်းများဖြည့်ဆည်းခြင်းဖြင့်တည်ဆောက်ထားခံရဖို့ကဒုတိယလေဆိပ်ခဲ့သည်။ "သူကဆိုသည်။
ပြုမိခံရဖို့ညွှန်ပြမှို Turhan အတွက်လေဆိပ် 85,5 တန်ချိန်သန်းက "ယခုအချိန်အထိ, ကျောက်တထောင်တန်ချိန်ကျနော်တို့ပြီးသား 242 တန်ချိန်သန်းအပေါ်ကျောက်ကိုတာတမံပြီးစီးပါပြီစက်ယန္တရားနှင့်အတူတစ်ဦးသောနေ့ရက်ဖြည့်သည့် 120 32 အောင်။ ဒါဟာငါတို့သည်လည်းအမျိုးအစားကြောကျခဲရေကာတံတိုင်း၏ 11 တန်ချိန်သန်း၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်လည်းအသုံးပြုပါသည်။ အဆိုပါအကျိုးအပဲ့တောင်ပို့ရေကာတံတိုင်းလေဆိပ်များ၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ပွားမှု 64 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပြီးစီး။ အခါတစျခုလုံးကိုလေဆိပ်အခြေခံအဆောက်အအုံအဆောက်အဦ, ကျနော်တို့စီမံချက်၏ 40 ရာခိုင်နှုန်းအနီးကပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပြီ။ "
ဝန်ကြီး Turhan, အ7၏ဆောက်လုပ်ရေးတထောင် 653 ကွန်ကရစ်လုပ်ကွက်ထုတ်လုပ်သူတို့တထောင် xnumx ရဲ့ရေကာတံတိုင်းအတွက်ဖြည့်စွက်တာဖြစ်ပါတယ်5ကြောင်းဖျောသူဆက်လက်: "ကျနော်တို့ကဒီနံပါတ်ကို 136 တထောင် xnumx'y ပြုစုမည်နှင့်ဤနှစ်ကုန်မှာရေကာတံတိုင်းပြီးစီးခဲ့ပါပြီလိမ့်မယ်။ ပို. ပင်အရေးကြီးသောလေယာဉ်ပြေးလမ်း, ခါးစညျးရှေ့ဖုံးနဲ့ taxiway ဆောက်လုပ်ရေးကိုလည်းယခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် superstructure အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို့လေဆိပ်ပေးသွားမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ကဒေသအဖို့အလွန်အရေးပါမှုပူးတွဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ 19 250 နာရီနေ့ရက်ကိုအထောက်အကူပြုဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ဤစီမံကိန်းများတွင်ပါက Rize နှင့် Artvin ရဲ့မြို့လယ်၏ခရိုင်၏ခရီးသွားလုပ်ငန်းအလားအလာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အရေးပါသောအလှူငွေဖြစ်စေမည်။ ပင်လယ်နက်ဒေသအတွက်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်အတူစီးပွားရေးအရဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ အရှေ့ပင်လယ်နက်ဒေသကြီးအတွင်းရှိလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ထုံးစံဖြစ်ပေါ်လာအောင်လိမ့်မည်။ "
Turhan အကျယ်၏3မီတာကပြောသည်အဖြစ် 45 ၏လေဆိပ်လေယာဉ်ပြေးလမ်းအရှည်တထောင်မီတာတည်ဆောက်ခဲ့, အကျယ်အတွက်တက္ကစီမီတာမှတဆင့်အရှည် 265 24 မီတာကိုချိတ်ဆက်ဖို့ခါးစညျးရှေ့ဖုံးမှပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရည်မှန်းချက်တိုးလာကြပါပြီ Turhan, တစ်နှစ်3သန်းခရီးသည်လေဆိပ်မိုးလုံလေလုံအာကာသ၎င်း၏တထောင်စတုရန်းမီတာတဦးတည်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသတိပြုအကြီးဆုံးလေဆိပ်နှင့်အတူ 30 ပတ်သက်. ဒေသအစေခံလိမ့်မယ် "ဟုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဧရာမစီမံကိန်းအား၏အရေးပါမှု၏, ငါတို့သည်ပြောပြ 2022 ပေမယ့်ယခုနှစ်ဖွင့်လှစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကိုအရှိန်မြှင့်။ ငါတို့သည်ဤစီမံကိန်းကိုလာမည့်နှစ်တွင်အောက်တိုဘာလအတွက်အစီအစဉ်ကိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ကိုင်ဖို့ငါတို့လမ်းကို update ပါလိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ "သူကဆိုသည်။
လေဆိပ်, စီမံကိန်းများကိုအမျိုးမျိုးတို့ကိုများအတွက်လမ်းပိတ်ဆို့ခြင်း, အ Turhan သူတို့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဘို့ပြုကြောင်းအလေးပေး trivialize ဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့် said:
"အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်ကဒီတစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သိအဖြစ်ပြည်နယ်ဘတ်ဂျက်ကနေတစ်ခုတည်းတစ်ပြားမှထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲလောကီသားတို့သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင်အကြီးဆုံးလေဆိပ်ထဲကတစ်ခုဆောင်ခဲ့လေ၏။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့နောက်ထပ်ဝန်ဆောင်မှုစွမ်းရည်ကိုဖန်တီးပေးရာသာအစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်။ ယခုပင်လျှင်နိုင်ငံများရှိစုဆောင်း-ဖြန့်ဝေ-လွှဲပြောင်း-operate (အချက်အချာ) ကိုတာဝန်မြင်နေအတွက်လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအချက်အချာလေဆိပ်အဖြစ်ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာတန်ဖိုးကဆက်ပြောသည်သိရသည်။ စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးတန်ဖိုးကဆက်ပြောသည်တူရကီမှသို့သော်ဤစီမံကိန်းအားတနျဘိုးလြော့စေရန်တစ်ဦးချင်းစီသည်စီမံကိန်းများ၏ရှေ့မှောက်၌ရပ်နေနှင့်ယခုသူတို့အကောင်းဆုံးလုပ်နေတာ။ '' ဒါဟာတည်နေရာမကောင်းမသင့်ဖြစ်၏, လုံခြုံမဟုတ်ပါဘူး။ '' သူတို့ကတံဆိပ်များ paste ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်, နှစ်ဦးစလုံးလေယာဉ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူကမ္ဘာ့ဦးဆောင်စီမံကိန်း၏တဦးတည်းထူထောင်ရှိရာနယ်မြေ။ သူတို့ဟာနေပါစေသူတို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုကြောင့်မပြောင်းနိုင်ပါ။ အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်ကိုလည်းအစ္စတန်ဘူလ်၌ဤတိုင်းပြည်တန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ "
ဝန်ကြီး Turhan, လေဆိပ်, အဝေးပြေးလမ်းမကြီး, သူတို့အမြိုးအတှကျကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်ထွက်ညွှန်ပြ, ရထားလမ်းစဉ် "ကျနော်တို့ဖွင့်လှစ်တဲ့အခါဒီလေဆိပ်ကိုလည်းဒီနေရာမှာဝေဖန်လိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အမှန်တရားကိုသိနှင့်လိုအပ်သောသည်အဘယ်အရာလုပ်နေပါလိမ့်မယ်။ " သူကပြောခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်သည်အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir အဝေးပြေးလမ်းမကြီးက၎င်း၏ Turhan ပြန်ပြောပြဖွင့်လှစ်ဂုဏ်ပြုခြင်းအကြီးဆုံးစီမံကိန်းများကိုတစ်ဦးအောက်ပါအကဲဖြတ်ဖန်ဆင်း:
"တနည်းကား, ကျနော်တို့အနေနဲ့မထွက်ပြည်နယ်ဘတ်ဂျက်ကနေ $ 11 ဘီလီယံကိုပေါင်တစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဝေဖန်သူများကဤစီမံကိန်းနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်၏လမ်းထဲကအနည်းငယ်နေ့ရက်ကာလအဘို့ဖန်ဆင်းထားသည်ကောက်ခံ။ '' သင်ကလမ်းအားဖြင့်သွားလျှင်သင်ကဒီလေကြောင်းလိုင်းပေါင်နှင့်အတူဒါဝေးကိုသွားသင့်ပါတယ်။ '', ငါ့အာရုံကိုဖမ်းမိ သူတို့ကဆိုသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာသာယာဝကိုတိုးပွါးစေသောဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးကြသည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမြိုးအတှကျဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံဟာအမှန်တရားသိရန်နှင့်အဖြေပေးသည်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့လိုအပွင့်လင်းလမ်းအသုံးပြုသူများအကြီးဆုံးအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်လေဆိပ်အဖြစ်ကဤဝေဖန်ချက်မှအဖြေကိုမှန်ကန်တဲ့အဖြေဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ဆုံးညှပ်အတွက် 100 ရာခိုင်နှုန်းကိုအပေါ်အသွားအလာ၏ပထမဦးဆုံးနေ့ရက်ကာလ၌ကြုံတွေ့ပြီးပြီကျနော်တို့ကို select သောစွမ်းရည်၏ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းအတွက် Bursa-Izmir, 50 ရာခိုင်နှုန်းကြားဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီကဏ္ဍတွင်အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir အဝေးပြေးလမ်းမကြီး။ "
ဝန်ကြီး Turhan, နိုင်ငံ၏ကျေနပ်မှုကိုမခံမကအခြားမျှော်လင့်ချက်များလည်းမရှိ, ဝန်ဆောင်မှုနှင့်သူတို့နိုင်ငံရေးတွင်ဝန်ကြီးဌာနအဘို့ထိုသို့ပြုကြောင်းဖော်ပြထားသည်, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစီမံကိန်းကိုအောင်သူသူတို့ကပြည်သူ့အစေခံရန်ဆက်လက်ပြောခဲ့သည်။
Rize နှင့်လေဆိပ်မှ Artvin အရေးပါသောခြေလှမ်း 13 / 06 / 2016 Rize နှင့်လေဆိပ်အဘို့အ Artvin အရေးပါသောခြေလှမ်း: တတိယကမ္ဘာကြီး, သမုဒ္ဒရာပေါ်တူရကီရဲ့ဒုတိယလေဆိပ် Rize နှင့် Artvin ကတည်ဆောက်လိမ့်မည်လေဆိပ်အမြင့်စီမံကိန်းကောင်စီ (HPC) အတွက်နည်းလမ်းဖြည့်ပါကဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ မေလ 12 တစ်ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုလေဆိပ် Rize-Artvin လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ xnumx't, Ordu-Giresun လေဆိပ်ပုံစံပေါ်တွင်တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ပြီးဒီလေဆိပ်ကနေပိုပြီးအဆာကြမ်းပြင် 2014 အသုံးပြုလိမ့်မည်။ လေဆိပ်အတူတူပင်အရွယ်အစားဖြစ်နှင့်လေဆိပ်များတွင်ပါလိမ့်မယ်, ပင်လယ်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း, တပြည်လုံးကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ လေဆိပ်လေယာဉ်ပြေးလမ်းစီမံကိန်းအရွယ်အစားကိုကိုးကား 2,5 737 မီတာကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ကီလိုမီတာရှည်လျားစီစဉ်ထားသည်ဘိုးအင်းထံမှ 800-45 အမျိုးအစားလေယာဉ်တင်လေယာဉ်ဆင်းသက်။ Terminal ကိုအဆောက်အဦနှင့်အခြား superstructure အဆောက်အဦနှင့်အတူ ...
Rize, Artvin လေဆိပ်အတွက်345 တထောင်မီတာမီတာလေယာဉ်ပြေးလမ်းဖွစျလိမျ့မညျ 17 / 10 / 2016 Rize, Artvin လေဆိပ်၏3တထောင်မီတာ 45 မီတာလေယာဉ်ပြေးလမ်းဖြစ်လိမ့်မည်: ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Arslan, Rize, Artvin လေဆိပ်, "3 တစျထောငျမီတာ 45 မီတာလေယာဉ်ပြေးလမ်းလိမ့်မည်, 265 မီတာ 24 မီတာ taxiway ကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေဆက်သွယ်မှုလမ်းမှဖြစ်လိမ့်မည်။ " သူကပြောပါတယ်။ ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်လေဆိပ်ဧရိယာတှငျတှေ့ Yesilkoy Rize-Artvin စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွက် Rize စီစဉ်ထားဆောက်လုပ်ရေး site ၏ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Ahmet Arslan စျေးကွက်ခရိုင်။ Arslan, စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးသတင်းထောက်တွေကိုအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan, Rize, Artvin လေဆိပ်, "3 45 တထောင်မီတာမီတာလေယာဉ်ပြေးလမ်းလိမ့်မည်, taxiway မီတာ 265 24 မီတာလမ်းလင့်များနှင့်လည်းငါတို့ဖြစ်လိမ့်မည် ...
လေဆိပ်အဘို့အ Rize နှင့် Artvin နူးညံ့ယနေ့ (ဗီဒီယို) ကျင်းပလိမ့်မည် 02 / 11 / 2016 လေဆိပ်အဘို့အ Rize နှင့် Artvin နူးညံ့မနက်ဖြန်: ကမ္ဘာ့တတိယ, ထိုလေဆိပ်အပေါ်တူရကီရဲ့ဒုတိယပင်လယ်ဝစွာနည်းလမ်း Rize ဖြင့်တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ပြီး Artvin လေဆိပ်နုများအတွက် 15 ကုမ္ပဏီတစ်ခုကသတ်မှတ်ချက်များဝယ်ယနေ့ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 34 Trabzon နှင့် Artvin များအတွက်စင်တာ, Rize စင်တာများကီလိုမီတာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 105 75 နယ်စပ်ကနေကီလိုမီတာယနေ့ကျင်းပမည့်ကမ်းရိုးတန်းနေရာဒေသနှင့်တနင်္ဂနွေYesilköyလေဆိပ်တင်ဒါ built-in ပါလိမ့်မည်ကီလိုမီတာ။ Ordu-Giresun လေဆိပ်ကုမ္ပဏီဒေသတွင်းလေဆိပ်အဘို့အ 15 သတ်မှတ်ချက်များဝယ်ပြီးနောက်လုပ်ပါတယ် Rize, Artvin built-in ပါလိမ့်မည်။ နုကမ်းလှမ်းမှုကို, လုပ်ခံရရန်အကဲဖြတ်အတွက်ကုမ္ပဏီများ၏ဘဏ္ဍာရေးကမ်းလှမ်းမှုကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အချင်းကိုလက်ခံရရှိသည့်ရက်စွဲအပျေါမှာ ...
Rize နှင့် Artvin လေဆိပ် Foundation မှဧပြီလချွတ်ကိုစလှေတျ 17 / 01 / 2017 Rize နှင့် Artvin လေဆိပ် Foundation မှဧပြီလချွတ်ကိုစလှေတျ: ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Arslan: "ပင်လယ်ကိုအပေါ်နည်းလမ်းများဖြည့်ဆည်းခြင်းဖြင့်တည်ဆောက်တူရကီရဲ့ဒုတိယလေဆိပ်ဖြစ်လိမ့်မည် Rize-Artvin လေဆိပ်အတွက်ဘဏ္ဍာရေးလေလံရရှိထားလေဆိပ်များအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦများတင်ဒါအနိုင်ရသူကိုတူရကီ, ဧရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 10 ၏တဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည် 15 ရက်။ ကျနော်တို့အတွက်ကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ် "ဟုအဆိုပါပင်လယ်ဝစွာနည်းလမ်းဖြင့်တည်ဆောက်ပါလိမ့်မည်ပေါ်သို့ Rize နှင့် Artvin လေဆိပ်များအတွက်ဘဏ္ဍာရေးလေလံရရှိခဲ့တူရကီရဲ့ဒုတိယလေဆိပ်ဖြစ်ပါသည်, ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan ဟုသူကဆိုသည်:" လေဆိပ်များအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦများတင်ဒါအနိုင်ရသူကိုတူရကီ, 10 ဖို့ဧရာမရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 15 ၏တဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည် ကျနော်တို့နေ့ရက်ကာလ၌ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ " သူကပြောပါတယ်။ ဧပြီလအထိလေဆိပ်၏အခြေခံပစ် ...
Rize နှင့် Artvin လေဆိပ်အခြေခံအုတ်မြစ်အခမ်းအနားထားကြ၏ 05 / 04 / 2017 Rize နှင့် Artvin လေဆိပ်ထားကြ၏အခမ်းအနား၏အခြေခံအုတ်မြစ်: Rize လေဆိပ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan ၏သဲအခမ်းအနားအခမ်းအနားရာအရပျကိုယူတက်ရောက်ရန်။ Rize စီမံကိန်း၏အရေးပါမှုကိုအာရုံစိုက်ဆွဲငင် Rize လေဆိပ်ရည်ညွှန်းဤနေရာတွင်သူ၏မိန့်ခွန်းထဲမှာဖွင့်လှစ်ပွဲအခမ်းအနားကိုဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်ကိုတကျရောကျအများပြည်သူဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒုတိယလေဆိပ်မှညွှန်ပြပြီးနောက်ဤလုပ်ငန်း, Ordu-Giresun လေဆိပ်တူရကီအတွက်ပင်လယ်အာဒိုဂန်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ပါလိမ့်မည်, 2021 အဆုံးသူစီမံကိန်း 2022 နှုန်းအဖြစ်ပြီးစီးလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။ ဦးဆောင်ကန်ထရိုက်တာများ၏ဆုတ်ခွာ၏အဖွင့်ရက်စွဲကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားနှစ်ဦးစလုံးမှပျော်ရွှင်လိမ့်မယ်ဟုပြောသည်လျှင်အာဒိုဂန်, မတော်တဆလွတ်အားလုံးတောင်းဆိုမှုများအတှကျလွှဲပြောင်းခြင်း, အလုပ်ဖြည့်စွက်ရန်လမ်းထဲမှာအလုပ်လုပ် ...
Rize နှင့် Artvin လေဆိပ် xnumx` အတွက်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည် 06 / 04 / 2017 Rize နှင့် Artvin လေဆိပ် xnumx` အတွက်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်: ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan, Rize နှင့် Artvin လေဆိပ်အောက်တိုဘာလ 2020 29 အတွက်ပြီးဆုံးပါလိမ့်မည်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အမ်းစထရောင်းသည်, မိမိကြေညာချက်ထဲမှာ Rize နှင့် Artvin လေဆိပ်ဒေသဆိုင်ရာလေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အလွန်önemsedikleriniအသုံးအနှုန်းများကဆိုသည်။ ဤသည်လေဆိပ်ကမ္ဘာ့ပင်လယ် "ကြောကျကိုဝစွာ၏ 2020 မီတာနက်ပြီး 25 တန်ချိန်သန်းပြုကြလိမ့်မည်, တတိယနှင့်တူရကီ Arslan ဒုတိယလေဆိပ်ကိုယ်စားပြုပါလိမ့်မည်ကိုဖန်ဆင်းသည်။ အလွန်အရေးကြီးသောအရေးပါမှုနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုလေဆိပ်အလေးပေးပြောကြားနိုင်ရန်အတွက်။ သမားရိုးကျအရွယ်အစားကျနော်တို့ 85 တထောင်မီတာ3မီတာလေယာဉ်ပြေးလမ်းကိုပဌနာအဘယျသို့ဖွစျလိမျ့မညျ ။ ကျွန်တော်လာနှင့်နိုင်ပါတယ်လေယာဉ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုပျံသန်းနိုင်ပါတယ်တဲ့လေယာဉ်ပြေးလမ်းအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ " သူကပြောပါတယ်။ Arslan, လေဆိပ် ...
အာဒိုဂန်, Rize နှင့် Air ထိန်းချုပ်ရေး၏ Artvin လေဆိပ်ဆောက်လုပ်ရေး 19 / 11 / 2017 ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအောင်န်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်, Rize နှင့်ရဟတ်ယာဉ်န်းကျင်လေ့လာနှင့်လေ့လာမှုများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်Güneysuခရိုင်အောင်သည်သူ၏ဇာတိမြို့ကနေရဟတ်ယာဉ်ဖြင့်ပြောင်းရွှေ့အများအပြားဆွေးနွေးပွဲ, ကျင်းပရန် Rize ကနေနိုင်ငံတော်သမ္မတအာဒိုဂန်မနေ့က။ လေဆိပ်ရဲ့ဧရိယာဖြစ်သော Rize-Artvin, Yusuf, Borçkaအတွက်ဆောက်လုပ်ဆဲ, နက်နဲ Muratli အာဒိုဂန်၏လေ့လာမှုလေထဲကကြည့်ရှုအားပေး, အာဏာပိုင်များအလုပ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ လူငယ်နှင့်အားကစားနှင့်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Osman Aşkın bak ဝန်ကြီး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan လိုက်ပါသွား။
Rize နှင့် Artvin အဆိုပါလေဆိပ်သို့အသစ်တစ်ခုကိုစံချိန်တင် 20 / 11 / 2017 ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan, တူရကီရဲ့ဒုတိယ, ကမ္ဘာကြီးကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းအဆောက်အဦမှ Third-ပင်လယ် Rize နှင့် Artvin လေဆိပ် 8-10 မီတာ built လျက်ရှိသည်ကြောင့်လည်းအသစ်တခုစံချိန်ဖြစ်ပါတယ်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လေဆိပ်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အမ်းစထရောင်းလေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်, လေဆိပ်တူရကီတဲ့ရေကာတံတိုင်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေး၏ယာယီ 390 မီတာပြီးစီးအရေးကြီးသောစီမံကိန်းများကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်, စီမံကိန်းပြီးစီးပြီးနောက်သူကဖယ်ရှားခံရကဆိုသည်။ Arslan သူတို့တစ်တွေသမားရိုးကျလေဆိပ်ပြုအလေးပေး, လေဆိပ်မှရှည်လျားတစ်မီတာကျယ်ပြန့်လေယာဉ်ပြေးလမ်း345 တထောင်မီတာသုံးအကြီးစားတွေ့ရှိပြီးသေးငယ်တဲ့-body လေယာဉ်များအတွက်တစ်ချိန်တည်းမှာရပ်နိုင်ပါလိမ့်မည် ...
ဝန်ကြီး Arslan Rize-Artvin လေဆိပ်ဆောက်လုပ်ရေးသုံးသပ် Make 02 / 03 / 2018 ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan, "နက်နဲပင်လယ်နက် 27 မီတာအပေါ်ပင်လယ်ပြင်မုန်တိုင်းနှင့်အတူရုန်းကန်နေတဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်နေတာ။ တိုးတက်လာတကယ်ဆောက်လုပ်ရေးမှဆက်စပ်ဝမျးသာစရာ။ မျှော်လင့်မကြာမီကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန်ဆောင်မှု Rize နှင့် Artvin လေဆိပ်ပူဇျောပါပွီပါလိမ့်မယ်။ " သူကပြောပါတယ်။ ဝန်ကြီး Arslan, လူငယ်နှင့်Aşkın bak အားဖြင့် Rize, Rize နှင့် Artvin လေဆိပ်များ၏စျေးကွက်ခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်အားကစားဝန်ကြီး Osman ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော Yenikoy အဆောက်အဦး၏စာမေးပွဲအတွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Arslan, ဒီမှာနေတဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်, Rize နှင့် Artvin လေဆိပ်အလုပ်ကြောင့်တူရကီလေယာဉ်၏လက်ရှိအနေအထားကိုပြသနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟုဆိုသည်။ အမ်းစထရောင်းသူတို့ကအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်တတိယလေဆိပ်ပြုသတိပေးအဖြစ်ကမ္ဘာကတူရကီ, Ordu-Giresun ပင်လယ်အဖြစ် ", ငြူစူခြင်းနှင့်အတူစောင့်ကြည့် ...
Rize နှင့် Artvin လေဆိပ်သည့်အခါဖွင့်လှစ်ကြမည်နည်း 14 / 02 / 2019 ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan, Rize နှင့် Artvin 2022 ဖြစ်ပါတယ်Havalimanı`N၏စာချုပ်ကာလအဆုံးသည်နှင့်အညီ, ကပြောသည် "ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာကျနော်တို့စီမံကိန်းန်ဆောင်မှုများဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ် 2020 တစ်နှစ်န်ထမ်းများအရေအတွက်တိုးပွားလာလိုအပ်သောအစီအမံများ, သင်္ဘောသား, ပစ္စည်းကိရိယာများ, စက်ပစ္စည်း, မော်တော်ယာဉ်, တာ။ " သူကပြောပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသောအစီအစဉ်များအောက်တွင် Rize ထံမှ Turhan ဝန်ကြီးများသည်စျေးကွက်ခရိုင်အတွင်းရှိဈေးရောင်းနှင့်အတူ chatted ။ ထို့နောက်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ဆောက်လုပ်ရေး Rize-Artvin လေဆိပ် Turhan လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ၏ကြာချိန်, အာဏာပိုင်များအလုပ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Turhan, ဤနေရာတွင်များ၏စာမေးပွဲအပြီးကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ဒုတိယလေဆိပ်ပင်လယ်၌တညျဆောကျကပြောသည်။ "ယခုနှစ်2၏လေဆိပ် ... : Turhan အကြောင်းကို 2020 ဘီလီယံကိုတူရကီလိုင်ရာလေဆိပ်၏ကုန်ကျစရိတ်ကပြောသည်ဟုဆိုသည်
Rize, Artvin လေဆိပ်အတွက်နောက်ဆုံးအမှု